Coronavirus uye chikamu chemabasa, 84% yemari yako yemubhadharo ichabhadharwa kwauri.
Funda anobatsira Chinese - Ultra inoshanda uye inodhura nzira inoshanda ...
Yakatumirwa ne Tranquillus | 28 Sea, 2020 | Kugadzirisa nekushanda muFrance
Nekuda kweiyo chirwere chekoronavirus, waunoshandira akasarudza kushanda nenguva pfupi-pfupi. Pakupedzisira, zvinofungidzirwa kuti vashandi vanopfuura mamirioni maviri vachakanganiswa nehurongwa uhu. Chii chinonzi kushaikwa kwemabasa, matanho api ekutora, ndiani uye uri kuenda rinhi kuripa iwe ? Mhinduro dzese kumibvunzo yako.
Chii kusarudzika kana kugona basa?
Kutaura nezve chikamu kana hunyanzvi kusashanda, izwi rekuti chikamu chidimbu rinoshandiswa nhasi. Sezvo mutemo wenguva dzose, izvi ndezvekambani iri kutarisana nekudonha kana kukanganisa kukuru mumabasa ayo. Kubhadhara muripo kuvashandi vayo uyo uchadzoserwa mari nehurumende. Izvi zvinobatsira kudzivirira layoffs.
Izvo zviri muchinyorwa ichi, uye izvi, chero zvingave zvingaitwa nebazi rako rehunyanzvi, iwe uchave wakaripirwa kusvika:
84% yemubhadharo wako wose uye 70% yemahara ako ese.
100% yemubhadharo wako kana uri uri pamubhadharo muhoro kana pakudzidziswa (CDD kana CDI).
Iine huwandu hwe4607,82 euros kana iwe uchidarika chikumbaridzo che4,5 nguva iyo yepasi muripo.
Ndeapi matanho ekutora?
It is at waunoshandira ita chikumbiro kuDunhu reDunhu Bhizinesi, Kukwikwidza, Kusevenzesa, Basa uye Basa. Kubatsira mabhizinesi munguva iripo, vakapihwa mazuva makumi matatu ekunyorera. Sezvaunofunga iwe, iwe uchagamuchira yako pay slip uye muhoro wako zvichienderana nenzira dzakajairwa. Munguva ino yekusashanda, chibvumirano chako chebasa chinomiswa, asi chisingakanganiswe. Ndokureva kuti iwe ucharamba wakabatana nekambani yako, uye kuti saka hazvibvumirwe iwe kuti ushande mukwikwidzi semuenzaniso. Mazhinji zvibvumirano zvebasa zvine iyi isina kukwikwidzana clause. Iwe hauna kurambidzwa kushanda, asi iwe unofanirwa kuzivisa waunoshandira.
VERENGA Mhando dzakasiyana dzekusiya, nguvai uye sei kutora mukana nazvo?
Tinogona isu kukumanikidza iwe kukumbira mashizha?
Munguva yekuvharirwa uye kutevera chibvumirano chekambani nemubatanidzwa uye musangano weSocial and Economic Committee. Bhizinesi rako rinogona kumanikidza iwe Mazuva 6 okusimuka yakabhadharwa zvakanyanya. Nguva yekuzivisa, inowanzove mwedzi mumwe chete, inosunungurwa uchifunga nezvemamiriro ezvinhu akasiyana neari kuitika muFrance. RTTs ichateverawo zvakafanana pfungwa.
Dai wanga uri kuronga kuenda kuzororo munguva pfupi. Unogona kufunga nezve kumbomira basa rako. Ziva kuti hapana chinomanikidza bosi wako kuti achinje mazuva ako ezororo. Pane kusapindirana, anogona kukuda iwe kana dambudziko rapfuura uye nekudaro achazeza kudzosera pazororo rako.
Vanozvishandira, vashandi venguva pfupi vevashandi uye vekumba.
Kune avo vanozvishandira, gadziriro inoitirwa kugadzirwa kwehomwe yemubatanidzwa. Iyi sisitimu inopa kubhadharwa kwekubatsira kwegumi nemazana mashanu emadhora pamwedzi. Ivo avo vakarasikirwa neiyo shanduko kana kuti vakarega kuita zvese vanozogona kubatsirwa nazvo.
Vashandi vashandi venguva pfupi vanobatsirwa nekushayikwa kwemabasa sekungofanana nevashandi pane zvekusingaperi kana zvenguva yakatarwa. Chimiro chechibvumirano chavo hachikoshesi kodzero yavo yekubatsirwa nehurongwa.
Kana iwe uri mushandi nevanhu, nanny, yekuchenesa mukadzi kana zvimwe. Iyo hurongwa yakafanana nokusashanda chikamu ichakubvumidza iwe kuti uwane makumi masere muzana% yemaitiro ako chaiwo. Wako waunoshandira achakubhadhara uye anozodzoserwa gare gare nehurumende.
Coronavirus uye chikamu chemabasa, 84% yemari yako yemubhadharo ichabhadharwa kwauri. May 12th, 2020Tranquillus
pashureNdiani anogona kubatsirwa nebasa rekumira rine chekuita nekuvharwa kwezvikoro? Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waripiwa, chii chinzvimbo uye nguva yekuripirwa?
zvinoteveraDzidza kunakidzwa neSKILLEOS, e-kudzidza platform
Hurongwa hwehutano hweFrance: kuchengetedza, mari, rubatsiro
Sei tichifanira kugadzirisa nekushanda muFrance?
Kupa mari kudzidziswa kwako kwenyanzvi
Praesent sem, quis luctus venenatis mattis risus. mattis Zvashandiswa huru kugutsikana
Kugamuchirwa kun-un-pro.fr, ndinoshandisa makiki kuti ndikupei chiitiko chakanakisisa pane nzvimbo yangu. Kana iwe uchiramba uchishandisa iyo yekupedzisira, ndinofunga kuti unobvuma kushandiswa kwekiki.OkRead more